I-LG G6 yothukile ngokwenyani kwaye ilahle ifowuni enganyangekiyo | I-Androidsis
I-LG G6, ifowuni enganyangekiyo
UAlfonso de Frutos | | LG, MWC
Ukusilela kwe-LG G5, isiphelo sendlela esishiye iimvakalelo ezilungileyo kakhulu xa sasinethuba lokuyizama, kodwa engakhange ibambe kwimarike, inyanzele umenzi ukuba arhoxe kwaye abeke ecaleni iifowuni ezijolise ekubonakaliseni LG G6.
Ifowuni egcina inxenye yesiseko somanduleli wayo ngekhamera engummangaliso ombaxa kunye ne uyilo olwenza ukuba i-LG G6 ibe yifowuni enomtsalane kwaye enganyangekiyo.
1 Uyilo lwe-LG G6 inika isixhobo ukuxhathisa okukhulu kwiimpembelelo kunye nokuwa
2 Olunye uphawu lobuchwephesha oludumisa phezulu kwicandelo
Uyilo lwe-LG G6 inika isixhobo ukuxhathisa okukhulu kwiimpembelelo kunye nokuwa
Kwaye i-LG G6 ayisiyo fowuni entle ene I-aluminium chassis eyinika ukubonakala kwepremiyamu. Njengoko unokuba ubonile kwividiyo ekhokelela kwinqaku, iqela loyilo le-LG licinge ngayo yonke into ukwenza iflegi yayo entsha isisindo sokwenene kwinqanaba eliphezulu.
Ukushiya uyilo lweemodyuli kuvumeleI-LG G6 iyamelana ngakumbi kunezinye iimodeli. Andithethi nje ngokuchasene IP 68 ekhusela isixhobo kuthuli namanzi. Kodwa ukuxhathisa kwefowuni uqobo.
I-80% yangaphambili ihleli kwiscreen, enkosi kwezifreyimu zincinci zinayo ifowuni. Kodwa kuthekani ukuba iwela emhlabeni? Ewe kubonakala ngathi ungahlala uzolile, ngokwento esiyibonileyo kwividiyo.
Isakhelo sealuminium esijikeleze isiphelo sendlela silungisa amacwecwe eglasi amabini ajikeleze umzimba wefowuni. Ngasemva komnxeba, sifumana umaleko weCorning Gorilla Glass 5, Okwangoku Inguqulelo yangaphambili yiGorilla Glass 3. Kutheni usebenzisa ingxelo esezantsi enika ukumelana okuncinci kwiscreen?
Ukuba uyaqaphela, Isikrini se-LG G6 sinemiphetho ejikeleze kancinane. Le nkqubo yenza, kwelinye icala, kube lula ukufikelela nakweyiphi na indawo kwiscreen ngesandla esinye, impumelelo enkulu ukuba sithathela ingqalelo ii-intshi ze-5.7 zepaneli yayo. Kwaye kwelinye icala, le miphetho ijikileyo inika ukhuselo olongezelelekileyo ngokufunxa ngcono ifuthe.
Kwindawo efanayo ye-LG kwi-MWC 2017 yaphosa ifowuni kubude obumalunga nemitha enesiqingatha ngaphandle kokonakala kwesixhobo, kucacile ukuba i-LG G6 iyamelana nefuthe kwaye iyawa.
Olunye uphawu lobuchwephesha oludumisa phezulu kwicandelo
Ibhanti LG Electronics
Umzekelo LG G6
Inkqubo yokusebenza I-Android 7.0 Nougat eneLG UX6 yolwabiwo ngokwezifiso
Isikrini 2880 "Quad HD + 1440 × 5.7 px bonisa ngetekhnoloji yeDolby Vision HDR10
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core kwi-2.35 Ghz
GPU I-Adreno 530 ukuya kwi-650 Mhz
Ukugcinwa kwangaphakathi Iimodeli ezingama-32 / 64Gb ngenkxaso yeMicroSd ukuya kuthi ga kwi-2Tb
Ikhamera esemva Dual 13 Mpx camera with 125º wide angle
Ikhamera yangaphambili 5 Mpx enekona ebanzi eyi-100º
Ezinye izinto Ukuxhathisa kwamanzi-ukufunda ngeminwe ngasemva kunye noMncedisi weGooge ofakwe njengesiqhelo-Imibala efumanekayo iPlatinum Mystic White kunye ne-Astral Black
Ibhetri 3300 mah
Ubukhulu 148.9 × 71.9 × 7.9 mm
U bunzima I-163 gram
Ngaphandle kokumangalisa, i-LG G6 ayisiyofowuni intle kwaye yomelele, ikwabonisa izixhobo zodidi oluphezulu. Nangona ingalinyusi igugu kwisithsaba seQualcomm, iprosesa yayo I-Snapdragon 821 kunye ne-4 GB ye-RAM enefowuni kunye ne-Adreno 530 GPU yayo baya kuvumela nawuphi na umdlalo okanye usetyenziso ukuba luhanjiswe nokuba bafuna umthwalo ongakanani na.
Ungasathethi ke ngescreen sayo. Sele sikubonise enye Thelekisa phakathi kwe-iPhone 7 Plus kunye ne-LG G6 apho kucacile ukuba isikrini se-LG G6 sibhetele kakhulu kuneso sikhuphisana naso. Kwaye masingayilibali ikhamera yayo, enye yezona zinto zibalaseleyo kwintengiso kwaye eya kukumangalisa ngeelensi zayo ezimbini eziza kukuvumela ukuba uthathe iifoto ezinomtsalane.
Ngaphandle kwamathandabuzo i-LG iphumelele ngolu tshintsho, ngoku Kuya kufuneka sibone ukuba uluntu luyamkela njani i-LG G6, ifowuni leyo izakufika kwimarike kungekudala Nangona inenqaku ngokuchasene nayo: imbangi yayo enkulu, iHuawei P10 sele ithengisiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG G6, ifowuni enganyangekiyo
I-beta yesibini ye-Android 7.1.2 ifika neendaba ze-Nexus 6P kunye nePixel C.
Isamsung yazisa ngokusesikweni umncedisi weBixby oza kukhuphisana noSiri